Maxaa loola jeedaa Jihaad, dagaallada Soomaaliya ka socdase Jihaad ma lagu tilmaami karaa? – Radio Muqdisho
Marka la soo hadal qaado Jihaad, durbadiiba waxaa dad badan maskaxdooda ku soo dhacaya dagaal hubeysan oo u dhexeeya gaalo iyo muslimiin.
Dalal badan oo caalamka ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay , waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo sheegta in ay Jihaad ku jiraan, kuwaas oo magaca diinta iyo Jihaadka ku geystay gabood fallo faro badan, kuna daadiyay dhiigga biri-mageydada, haba ugu badnaadeen dadka Muslimiinta ah.
Haddaba waa maxay macnaha dhabta ah ee Jihaadka? Immisa qeybood ayuu u qeybsamaa? dagaallada Soomaaliya ka socda ma lagu tilmaami karaa Jihaad? Alshabaab ma yihiin Mujaahidiin ? Su’aalahaas iyo kuwo kale waxaan kaga jawaabi dooonnaa Barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cali Sheikh Maxamuud Sheikh Cali Dheere
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si diiran loogu soo dhaweeyay Cadaado